सर एलेक्स फुर्गसनबारे यी कुराहरु तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
इंलिस क्लब म्यानच्यास्टर युनाइटेड क्लबका सफल प्रशिक्षक एलेक्स फर्गुसनको जन्म सन् १९३१, ३१ डिसेम्बरमा भएको थियो । स्कटिस खेलाडी फर्गुसनले सन् १९८६ मा म्यानच्यास्टर युनाइटेड क्लबको प्रशिक्षकको पद सम्हालेका थिए । सन् २०१३ मा उनले सन्यास लिएका थिए । विश्व फुटबल इतिहासमा प्रशिक्षकको रुपमा पाएको उनको सफलता भुल्नै नसकिने छन् । स्कटिस क्लबहरुमा फुटबल खेल्दा उनी
स्टाइकरको रुपमा फुटबल खेल्ने गर्थे । सन् १९५५–५६ को स्कटिस लिगमा उनी टप स्कोरर पनि रहेका थिए ।
उनको जन्मदा खेरीको नाम सर एलेक्स च्यापम्यान फर्गुसन रहेको थियो । त्यसपछि उनको नाम एलेकजेण्डर बिटोन फर्गुसन रहन गएको थियो । पानी जहाज निर्माण कम्पनीमा उनी र उनको श्रीमती एलिजाबेथ हेल्परको काम गर्थे । उनी आफ्नो हजुरआमाको घरमा हुर्किएका हुन् । पछि गोभन रोडमा रहेको परिवारको घरमा उनी सरेका थिए जहाँ उनको मातापिता र भाइ मार्टिन बस्दै आइरहेका थिए ।
सर एलेक्स फर्गुसनले ब्रुमलोन रोड प्राइमरी स्कुल प्राइमरी शिक्षा लिएका थिए । पछि उनी गोभन हाइस्कुलमा भर्ना भएका थिए । म्यानच्यास्टर मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयले सन् २००९ मा उनलाई बिजनेश एडिमिनिसट्रेसनमा मानार्थ विद्यावारिधी दिइएको थियो । सोही विश्वविद्यालयबाट उनले पाएको यो दोस्रो डिग्री हो । सन् १९९८ मा उनले मानार्थ मास्टर डिग्री पनि प्राप्त गरेका थिए ।
सर एलेक्स फर्गुसनको फुटबल खेल जीवन १६ वर्षको उमेर देखी सुरु भएको थियो । उनी आफ्नो पहिलो दिनको खेल जीवन सम्झेर अझै पनि अचम्ममा पर्ने गर्छन् । उनी भन्छन्,‘पहिलो खेल निकै खराब रहेको थियो । क्विन्स पार्कमा सोलिटारी गोलरक्षकको रुपमा खेलेको थिए ।’ उनले आफ्नो फुटबल करिअर सन् १९७४ मा अन्त्य गरेका थिए । आयर युनाइटेड उनको खेल जीवनको अन्तिम क्लब रहेको थियो । खेल जीवन सकिएपछि उनी प्रशिक्षकको कार्यभार सम्हाल्न आतुर देखिए । जसमा उनी सफल भए ।
सर एलेक्स फर्गुसन इस्ट स्टिरलिङसिर क्लबको प्रशिक्षक हुँदा उनी ३२ वर्षका थिए । सन् १९७४ मा प्रशिक्षकको पद सम्हालेका उनी निकै कडा स्वभावका थिए । उनी क्लबमा अनुशासन कायम गर्न जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि पर्थेनन् ।
सन् १९७८ मा उनी सेन्ट. मिरेनले उनलाई प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्त गर्यो । उनले क्लबमा रहिन्जेल एउटा बलियो र राम्रो फुटबल खेल्ने टोली बनाए । उक्त क्लबबाट निकै राम्रा र फ्रेस खेलाडीहरु पछि गएर निकै प्रख्यात खेलाडी समेत बने । सन् १९७८ को क्लबमा विवाद परेपछि उनलाई क्लबले निकालेको थियो । सोही साल नै उनी एबरडिन क्लबमा आवद्ध भएका थिए ।
धेरै विश्लेषकहरु उनीबारे बोल्न पनि डराउँछन् । तर, उनीहरुका अनुसार उनी हालसम्मकै सफल प्रशिक्षक हुन् । सन् १९८६ मा उनी म्यानच्यास्टर युनाइटेड क्लबको प्रशिक्षकमा नियुक्त भए । उनको नेतृत्वमा क्लबले १३ वटा प्रिमियर लिग उपाधि, चारवटा लिग कप, २ वटा युरोपियन कप, एउटा युरोपियन कप विनर कप र पाँचवटा एफएकप उपाधि जित्न सफल भए । सन् २०१३ मा उनले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिए । यी सबै सफलताले पनि फर्गुसनले म्यानच्यास्टर युनाइटेड क्लबलाई एउटा उचाइमा पुर्याउन सफल भए ।
सन् १९६६ मा सर एलेक्स फर्गुसनले क्याथी फर्गुसनसँग विवाह गरेका थिए । उनका तीनवटा बच्चाहरु रहेका छन् । उनीहरु मार्क, ड्यारेन र जेसन हुन् ।
उनले आफ्नो सफल करिअरमा धेरै अवार्डहरु हात पारे । सन् २०११ मा उनले म्यानच्यास्टर युनाइटेड क्लबमा प्रशिक्षक भएर २५ वर्ष पुरा गरेका थिए । उनले क्लबलाई दिलाएको सफलतालाई मध्यनजर गर्दै उनको शालिक क्लब बाहिर निर्माण गरिएको थियो ।
उनले ४९ वटा ट्रफीहरु म्यानेजरिअल करिअरमा पाएका छन् ।
उनले पाएका प्रमुख ट्रफीहरु यस्ता रहेका छन् ।
१.अफिसर अफ दि अर्ड अफ दि ब्रिटिस एम्पायर (१९८५)
२. कमाण्डर अफ दि अर्ड अफ दि ब्रिटिस एम्पायर (१९९५)
३. नाइट ब्याचलर (१९९९)
४. फ्रिडम अफ दि सिटी अफ एबरडिन (१९९९)
५. फ्रिडम अफ दि सिटी ग्लासगो (१९९९)
६. फ्रिडम अफ दि सिटी अफ म्यानच्यास्टर युनाइटेड (२०००)
७. फ्रिडम अफ दि ब्रोरोफ अफ अलट्राफोर्ड (२०१३)
एलेक्स फर्गुसनबारे केही रोचक तथ्यहरु
– सर एलेक्स फर्गुसन म्यानच्यास्टर युनाइटेडमा रहिन्जेल १५०३ अंक जोड्न सफल भएका थिए ।
– फर्गुसन म्यानुमा भइन्जेल म्यानुले अंक तालिकामा तेस्रोभन्दा तल हुनु परेन ।
– म्यानच्यास्टर युनाइटेडबाट पाँचजना यस्ता विश्व चर्चीत खेलाडीहरु निस्किए जसको आज पनि चर्चा हुन्छ । रायन गिग्स, पाउल स्कोल्स, डेबिड बेकह्याम, ग्यारी नेभिल्ल, निक्की बट जसले ३०३८ पटक म्यानुबाट आफ्नो उपस्थिति जनाए ।
– सन् १९९६ मा म्यानच्यास्टर युनाइटेड च्याम्पियन्स र एफए कप प्रतिस्पर्धा गर्ने पहिलो इंलिस क्लब बन्यो ।
– सन् १९९७ मा युनाइटेड लिजेण्ड इरिक कानटोनाले म्यानुका लागि २२० खेलमा ६९ गोलको रेकर्ड राख्दै सन्यास लिए ।
– फर्गुसनको अपराजित यात्रा ४५ खेलसम्म रहेको छ । यो सन् १९९८ देखी १९९९ सम्म चलेको थियो ।
– म्यानच्यास्टर युनाइटेडको जर्सी लगाएर सबैभन्दा कम समय फुटबल खेल्ने खेलाडी हुन् क्रिस स्मलिङ । सन् २०१२ मा उनले ११ सेकेण्डमात्र खेल्न पाएका थिए ।
– चौधवटा खेलमा एक गोल पनि नखाएको इतिहास म्यानुले बनाएको थियो
। सन् २००८–०९ मा भएका १४ खेलमा म्यानुले एक गोल पनि खाएको थिएन ।
– म्यानुलाई फर्गुसनले १४९८ खेल खेलाएका थिए । उनको जीत औस ५९.७१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै प्लस१४०४ गोल भिन्नता राख्न समेत उनी सफल भएका थिए ।
– सन् २००७–२००८ मा म्यानच्यास्टर युनाइटेडले पुरै सिजनमा २२ गोल खाएको थियो । यो सिजन सबैभन्दा कम गोल खाएको सिजनको रुपमा रह्यो ।
– ३९ वर्षीय रायन गिग्स म्यानच्यास्टर युनाइटेडमा सबैभन्दा लामो समय बिताउने खेलाडी हुन् । उनले ९३९ खेलमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए । – एजेन्सी